मलाई फ’साउने षड’यन्त्र हुँदैछ’ – – All top Here
Home/समाचार/मलाई फ’साउने षड’यन्त्र हुँदैछ’ –
काठमाडौं। सभामुख कृष्णवहादुर महराले राजीनामा दिएपछि महराका छोरा तथा नेकपका नेताहरुले सभाम्ख पदमा जान पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले सड’यन्त्र गरेको अरोप लगाउँर्दै सामाजिक संजाल मार्फत धम्कि दिएका छन्। नेम्बाङले राजीनामाको बैधानिकताका विषयमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर महरा पुत्रले नेम्बाङमाथी अरोप लगाएका हुन्।
‘महरा पदको भोगी होइनन्। आरोपित घ’टनाक्रम पुष्टि गर्न नैतिकताका आधारमा राजीनामा लेखेका हुन्। महपुत्र विकासले लेखेका छन्, ‘कति छिटो आँ गरेर बसेको ? कमरेडहरु नै आफ्ना कमरेडको अस्तित्व छिटो समाप्त होस् भन्ने कामना गर्न लागेपछि षडयन्त्र केलाई बुझ्ने ? धैर्य गर्नुस्।’
झापा बाट प्रधानमन्त्री ओली लाई